Sarom-paosy landy | Famokarana sy orinasa mpivarotra mahafinaritra voafetra
Fahasamihafana eo amin'ny 19 mm, 22 mm, 25 mm ho an'ny pillowcase landy
Ny isan-jaton'ny landy isaky ny santimetatra toradroa amin'ny landy 22 mm dia saika 20% ambony noho ny an'ny landy 19 mm. Ny lanjan'ny momme avo kokoa dia midika koa fa ny tenona dia matevina kokoa, ary io tenona matevina io dia manampy amin'ny fiarovana ny famirapiratana sy ny famirapiratan'ny landy. Manome toerana haharetana maharitra kokoa izany.
Ny androm-piainan'ny ravin-landy madio misy lanjany 22 mm dia tombanana ho avo roa heny noho ny ravina landy misy lanjan'ny momme ambany. Na dia matevina noho ny landy 19 mm aza ny landy 22 mm dia malefaka toy ny an'ny 19 mm ihany koa ary manana endrika mamiratra kokoa.
Ny lamba landy madio misy lanjan'ny momme 19 mm dia fifangaroana maharitra, be pitsiny ary lafo vidy. Izy ireo dia mora vidy, ary natao ho an'ny fampiasana isan'andro, ary mahazaka ny fanadiovana mahazatra. Raha voakarakara tsara izy dia haharitra mandritra ny vanim-potoana tsara ny famirapiratana, ny fampiasa ary ny famirapiratan'ilay landy 19 mm. Toy ny landy 22 mm, ny landy 19 mm dia milamina sy malama.
Ny isan-jaton'ny landy isaky ny santimetatra toradroa amin'ny landy 25 mm dia 30% mihoatra ny an'ny landy 19 mm. Amin'ny fikolokoloana sy fanadiovana araka ny tokony ho izy dia mety haharitra 10 taona eo ho eo ny lamba landy 25 mm. Ny landy 25 mm dia fantatra amin'ny haitraitra sy ny hakantony. Ny lamba landy 25 mm dia azo ampiasaina amin'ny zavatra toy ny fandriana fampakaram-bady, fankalazana ny fifamofoana ary fanomezana fanomezana.
Ny haben'ny Pillowcase vita amin'ny landy
Safidy loko bebe kokoa
Fomba fanamboarana saron-doha landy mainty
Ireto misy dingana tsotra fanamboarana haingana azonao atao mba hamerenana amin'ny laoniny ny famirapiratan'ilay ondana landy vita amin'ny landy. ●
● Dingana voalohany
● Dingana faharoa
● Dingana fahatelo
● Dingana efatra
● Dingana fahadimy
Inona no tokony hataonao alohan'ny hividianana ondana ondana?
Alohan'ny ahazoana ondana lamba landy, angataho ny mpanamboatra anao hanome anao ny tatitra momba ny fahamendrehan'ny lamba landy. Azoko antoka fa tsy mila lamba landy miova loko ianao aorian'ny fanasana azy indroa na intelo.
Fa raha tsy misy ny tatitra momba ny fanandramana dia azonao atao ny mihazakazaka manamarina ny tenanao. Mangataha ampahany amin'ilay lamba novidinao tamin'ny mpanamboatra azy ary sasao amin'ny rano klorinina sy ranomasina. Aorian'izay, kitiho amin'ny vy fanasan-damba mafana. Ireo rehetra ireo dia hanome anao hevitra ny faharetan'ny pillowcase vita amin'ny landy.